Madaxweyne Xasan oo ka digay in dalka laga sameeyo kacdoon shacab oo bur-bur dowladeed horseedi kara – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan oo ka digay in dalka laga sameeyo kacdoon shacab oo bur-bur dowladeed horseedi kara
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga digay in dalka laga sameeyo kacdoon shacab ee lagu duminayo nidaamka dowladnimo ee haatan jira, si lamid ah kacdoonkii lagu dumiyay dowladdii militeriga ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre, sanadkii 1991-ka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marka hore sheegay inay jiraan shaqsiyaad kicinaya kacdoon shacab islamarkaana doonaya in markale uu dalka galo bur-bur aanu weligiisa dambe kasoo kabsan, wuxuuna dhinaca kale ku baaqay in laga hortago waxkasta oo dalka u horseedi kara bur-bur dowladnimo.
Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale ku baaqay in laga hortago shaqsiyaadkaasi kacdoonka shacbeed ka wada dalka, islamarkaana si wadajir ah loo ilaaliyo nidaamka dowladnimo ee haatan dalka ka jira.
“Sida aad la socotaan Soomaaliya waxay burbur iyo dagaal kusoo dhex jirtay muddo rubac qarni ah, dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedana haatan waxay haayaan wadadii saxda ahayd ee dowladdnimo, marka ma ahan inaan gacanteena ku dumino wixii aan in muddo ah soo dhiseynay, maxaa yeelay waxaa la xasuustaa waxii laga dhaxlay markii la riday dowladdii dhexe ee uu dalka lahaa” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la muujiyo midnimo iyo in loo hogaansamo waxkasta oo horseedi kara in dalka uu horumar weyn gaaro.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xilli bisha soo socota ee October ay dalka ka dhici doonaan doorashooyin iskugu jira mid baarlamaan iyo madaxweyne, waxaana ilaa iyo haatan la ogeyn waxa ay doorashadaasi kusoo dhamaan doonto.